FIANGONANA TSENA MORA – Madatopinfo
Hoy ny mpanao gazety namana iray, tsy azo atao ny makany am-piangonana fa tsy voafehy ny olompirenena miangona amin’ny varo-mora. Tsy ho araky ny Filoha ny hitety ny EPP rehetra fa misy tomponandraikitra any amin’ny vakimparitra sy Fokontany ary Kaominina sy distrika izay heverina ho manipy hoditrakondro amin’ny vahoaka sy ny mpitondra mikasika ny valanaretina.
Sao MBA tokony haterina isan-trano tompoko ilay fanomezana fa tena tsy lasa mihintsy ny fivoriam-be hoatra an’izao,isaky ny hizara zavatra.
Tsy misy manao tapim-bava
Tsy voahaja ny elanelana iray metatra
Sain-tsaino angeh ehhhh
Sarotra ihany izy ity ka.
Maninona raha ankinina amin’ny Chef fokotany ny maka ny lisitr’ireo tokony hampiana ao aminy,dia asiana mpanara-maso miaraka aminy..de aterina isaky ny trano fa Tena tsy lasa izao.
Rahampitso no halefako ny vidéo misy fitangoronana jiaby.
Mampalahelo Be ,,fa mbola tsy resy lahatra amin’ny fihibohana an-trano ny sasany..
Tena mampitain-taina Be mandinika raha karaha’ity.
NB: Sary fizarana fanampiana tamin’ireo Joker tao amin’ny EPP Morarano .